के यस्तो पनि हुन सक्छ??? तर यो सत्य घटना हो! – Dainiki Online
May 19, 2021 May 19, 2021 adminLeaveaComment on के यस्तो पनि हुन सक्छ??? तर यो सत्य घटना हो!
डाक्टरहरुले झण्डै ४ घण्टाको शल्यक्रियाबाट उनको पेटमा रहेका ७२ वटा सिक्का निकाल्न सफल भए । एजेन्सी
Tagged सत्य घटना